အကြံပေးအရာရှိ ပြောပြသည့် လျှပ်စစ်မီးဆိုင်ရာ အကြံကောင်းများ – Great Advisory Ideas – MoeMaKa Burmese News & Media
အကြံပေးအရာရှိ ပြောပြသည့် လျှပ်စစ်မီးဆိုင်ရာ အကြံကောင်းများ – Great Advisory Ideas
May 24, 2012 May 24, 2012 Yan Lo Kywe
မေ ၂၄၊ ၂၀၁၂
ယနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု သွားတက်သည်။ အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အကြံပေးအရာရှိများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
အကြံပေးအရာရှိတဦး ဖြန့်ဝေသော စာတစောင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြုလုပ်သော စာနယ်ဇင်း ရှင်းပွဲ ဟူ၏။
ထိုသူ၏ ပုဂ္ဂလိက ရေးသားဖြန့်ဝေသော စာမှာ အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း ဖြစ်၏။
ရှင်းလင်းပွဲဟူသည် ရှင်းလင်းအောင် လုပ်သောပွဲ ဖြစ်သည်။ တခါတရံ ရှုပ်အောင်လုပ်သောပွဲလည်း ဖြစ်သွားတတ်သည်။
ဦးစွာပထမ အကြံပေးအရာရှိများက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်ကြသည်။
သတင်းထောက်တို့က အသံဖမ်းစက်များကို တတီတီ နှိပ်လိုက်ကြသည်။ အားလုံးလိုလိုတွင် ယူဆောင်လာကြသော ကင်မရာကြီးငယ်များဖြင့် တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်ကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ အကြံပေးအရာရှိ ရာထူးတွေ ထိုက်တန်စွာ ရရှိထားတာကို လူတချို့က မလိုတမာဖြစ်နေကြပါတယ်” ဟု ဦးဆောင် ရှင်းလင်းသူက ဆိုသည်။
ဦးဆောင်ရှင်းသူ၏ လေကြောကို သတင်းထောက်တို့ ကြိတ်မှိတ် သည်းခံရသည်။ သူ၏ လေကြောက နိုင်ငံကျော်ပင်။ Mrs. TV4တွင် မကြာခဏ ၀င်ရောက် လေပေါတတ်သော သူ့အား တနိုင်ငံလုံးက သိကြလေသည်။ သူ့အစီအစဉ်လာသည်နှင့် လိုင်းပြောင်းကြ၊ တီဗီပိတ်ကြသည်ကို အနှီအကြံပေးဆရာကြီး သိဟန် မတူ။
ကွမ်းနှစ်ရာညက်ခန့်ကြာသော်လည်း အကြံပေးသူကြီး၏ မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ရှင်းလင်းခြင်း အစီအစဉ် နိဂုံးချုပ်ခြင်း မရှိသေးပေ။
“တပ်မတော်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်မှန်း ကြွရောက်လာတဲ့ သတင်းထောက်မင်းများ သိကြပါတယ်” စသဖြင့် စသဖြင့် အတည်ပေါက် ပြောလေ၏။
“လိုရင်း ပြောရရင် ဒေါက်တာဦးမြင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဖြန့်တဲ့စာဟာ ကျွန်တော်များ အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ လုံးဝ မဆိုင်ဘူး ဆိုတာ အဓိက ပြောကြားလိုပါတယ်”
ထိုသို့ အာဘောင်အာရင်းသန်စွာ နိဂုံးချုပ်ပြီး သကာလ မေးခွန်းများ မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်လေသည်။
ဒေါက်တာဦးမြင် ဖြန့်သောစာမှာ ဦးမြင်၏ အမြင်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်များ ရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုစာက အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်းလည်း နားလည်ပြီး ဖြစ်သည်။
ထိုသို့နားလည်သော်လည်း ရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ကြခြင်းမှာ အကြောင်းရှိသည်။ လူပြောများသော လျှပ်စစ်မီး ကဲ့သို့သော အကြောင်း အရာများ မေးမြန်း ရေးသားလိုသောကြောင့် ဖြစ်လေ၏။
သတင်းထောက်တို့က မီးအကြောင်း မေးကြလေ၏။
“လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ပေးပါ ဆိုပြီး ဆန္ဒပြတာတွေကို ကျွန်တော်တို့လည်း သိပါတယ်။ Facebook မှာ အကုန်လုံး ဓာတ်ပုံတွေရော ဘာတွေရောက် တက်နေတာ ကျွန်တော် တွေ့သားပဲ။ ဒီလို ဆန္ဒပြတာတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ မြှောက်ပေးတာများ ဖြစ်မလား ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ သံသယ ဖြစ်မိတယ်။ ဒါမှ သတင်းရေးနိုင်မယ် မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားတို့ မြှောက်ပင့်ပေးတာ ဆိုရင်တော့ တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူခံရမှာပဲ ဆိုတာ ဒီနေရာကနေ ကျွန်တော် ပြောချင်တယ်”
နိုင်ငံတော်က လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အလေးထားသည်ဟု အထင်ရောက်ကြစေရန် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ၁ နှင့် ၂ ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းရန် သူကပင် အကြံပေးခဲ့ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်မှုမရှိခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးအတွက် သူ့တွင် အိုင်ဒီယာ များစွာ ရှိကြောင်း၊ တချို့ကို မျှဝေလိုကြောင်း ပြောသဖြင့် သတင်းထောက်တို့လည်း ရေးရ မှတ်ရလေသည်။
“မီး လာလာ မလာလာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပေါ့ဗျာ။ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတာဟာ အရမ်း Romantic ဖြစ်တယ်၊ ချွေတာရာလည်း ရောက်တယ်။ ဖယောင်းတိုင်သာထွန်း။ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေရင် ရွှေတိဂုံဘုရား အနောက်ဘက်မုခ်မှာ ဗေဒင်ဆြာ စောငို ဆိုတာ ရှိတယ်။ သူ့ဆီက ဆေးဖယောင်းတိုင် သွားတောင်း။ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထွန်း။ အနည်းဆုံး အခန်းထဲမှာတော့ လင်းထိန်သွားလိမ့်မယ်”
သတင်းသမားများလည်း ဗေဒင်ဆြာ စောငို ဟူသော အမည်ကို ကမန်းကတန်း လိုက်လံ ရေးမှတ်ကြလေ၏။
သတင်းထောက်တဦးက လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖူလုံစေရေးအတွက် နျူကလီးယားစက်ရုံထောင်ရန် အစီအစဉ် ရှိမရှိ မေးမြန်းရာ –
“ဂျပန်မှာတောင် ဒီလို စက်ရုံက ခေတ်မစားတော့ဘူး။ ဂျပန်ပြည်သူတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့ မတူဘူးလေ၊ ချွေတာတယ်။ ဒီတော့ ရှိတဲ့ နျူကလီးယားစက်ရုံ ၄၀ မှာ နှစ်ခုပဲ ကျန်တယ်။ ကျန်တာတွေ ပိတ်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော်က ဂျပန်လို ရေချိုးတာ များတော့ ဂျပန်အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိတယ်။ အခုလို မေးမြန်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ဖြေကြားလေသည်။
မေးခွန်းမေးသူ မရှိတော့သဖြင့် နိဂုံးချုပ်စကား ထပ်မံ ပြောကြားလေသည်။
“မီးမလာတော့ ဓာတ်လိုက်မှာ ပူစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ အကောင်းမြင်တတ်ရမယ်။ လျှပ်စစ်မီး မလာတော့ မီတာခ သက်သာတယ်လို့ အကောင်းဘက်က တွေးရမယ်။ ဖယောင်းတိုင်က ကုန်ကျစရိတ် နည်းတယ်။ ချွေတာခြင်းဟာ ကောင်းတယ်။ ချွေတာရေးကြောင့် အားလုံး အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ ၃၈ ဖြာ မင်္ဂလာရဲ့ စာကြောင်းရေ ၂၄ မှာ အတိအကျ ဆိုထားတယ်လေ သန္တုဋ္ဌီ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ တဲ့” ဟု အဆက်မပြတ် ပြောသဖြင့် သတင်းထောက်တို့လည်း မပြန်နိုင်သေးဘဲ သည်းခံပြီး နားထောင်ရလေသည်။
အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အကြံပေးအရာရှိကြီးက ဆက်ပြောသည် –
“ရောင့်ရဲရမယ်၊ ချွေတာရမယ်၊ ကျွန်တော် ဆိုရင် ၀င်သက် ထွက်သက်ကိုတောင် ချွေတာတယ်။ အသက်မရှူဘဲ ၀င်သက်ကို ဘယ်လို ချွေတာရေး လုပ်သလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် လက်တွေ့ပြမယ်”
အကြံပေးအရာရှိကြီးက ထိုသို့ အတည်ပေါက် ပြောဆိုပြီးနောက် မျက်လုံးကို မှိတ်လိုက်ပြီး အသက် ရှူသွင်းခြင်း၊ ရှူထုတ်ခြင်းတို့ကို ရပ်နားလိုက်သည်။
အကြံပေးအရာရှိကြီး၏ မျက်နှာက တည်ငြိမ်လွန်းလှသည်။ ဆယ်စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင် မျက်လုံးတစ်ချက် ဖွင့်ကြည့်သည်။ သတင်းထောက်များအားလုံးသူ့ကို ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည်။
သူလည်း မျက်လုံး ကမန်းကတန်း ပြန်မှိတ်ပြီး ၀င်သက် ထွက်သက် ချွေတာရေးလုပ်ပုံကို ဆက်လက် ပြသလေသည်။ သတင်းထောက်များလည်း အံ့အားသင့်နေကြသည်။
နောက်ထပ် ဆယ်စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင် အကြံပေးအရာရှိကြီး မျက်နှာ နီရဲလာသည်။ ယင်းသို့ နီတွတ်လာသော်ငြား သူ၏ ၀င်သက် ထွက်သက် ချွေတာရေး သရုပ်ပြမှုကို ရပ်နားခြင်း မရှိပေ။ သို့သော် အနည်းငယ် ပုံပျက်စ ပြုလာသည်။ တမိနစ်ကျော်ကြာသောအခါ ထိုင်ခုံပေါ်မှ ကြမ်းပြင်သို့ ပြုတ်ကျလေ၏။
ငြိမ်သက်နေသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲက ထိုအခါမှ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်။
သတင်းထောက်တဦးက တခြားသော အကြံပေးအရာရှိများကို “ဆေးရုံကား မခေါ်ဖို့ ကျွန်တော် အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒါမှ ချွေတာရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်” ဟု လှမ်းပြောလိုက်လေသတည်း။
← အားကစားသမားဘဝ.. အမှတ်တရများ.. – student sports festivals days
Saw Ngo cartoon in Rangoon strike →
မောင်ဥက္ကလာ – ကောင်မလေးကို မထိနဲ့
Uncategorized သရော်စာ ဂျော်ဒီး
ဂျော်ဒီး – ၂၀၁၄ သင်္ကြန် သံချပ် (မိုးမခ မဏ္ဍပ်) (၁) ဂျော်ဒီး
April 4, 2014 Aung Htet
မောင်လူရေး – နတ္ထိပစ္စယော
12 thoughts on “အကြံပေးအရာရှိ ပြောပြသည့် လျှပ်စစ်မီးဆိုင်ရာ အကြံကောင်းများ – Great Advisory Ideas”
Best Humor * says:
Best humor in this month!
Ko Ko Hlaing , now , is historic person like electric minister Zan Min—–for their brilliant ideas and talkings —Burma best clowns —-not Zar Ga Nar.
Please write with this style more , more for theses most shameless creatures of the world and human history..
Brainless advisers for brain-deficient so called President who has no chance to win in 2015 , so to save face , will retire . ….
Maybe Burma is cursed country! Shame to be shared DNA with them…
*U AYE says:
Everybody know the knowledge, wisdon and experience of Dr. U Myint.
Now we had chance to know U Ko Ko Hlaing’s. How to solve the energy crisis? To save the electricity, use candle light. (or) ka-nyin-se and saw duct will be more practical.
Please advise how to get water. Visit to river site with family like Hindus go to Ginga.
Lwin May Thein says:
stupid Ko Ko Hlaing,
win mon says:
stupid adviser. No brain
အရင်ကတည်းက ဖြစ်နေတာမှန်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတည်းက ပြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလောက်မဆိုးနိုင်ပါ။ အရင်တုန်းကတော့ အသံထွက်ရင် ခံရမှာမလို့ မထွက်ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ပြောချင်တာတွေကို ပြောနေကြတာပါ။ အရင်လိုပဲဆိုရင်တော့ ပြသာနာမရှိခဲ့ပါဘူး။ မြစ်ဆုံပေါ်လာတော့ ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းက လူတွေရဲ့ စိတ်တွေကို လှုပ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပဲ။ တာဝန်မဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းက ဖောင်စီးရင်းရေငတ်ရတဲ့ဘ၀ကို ပြောလိုက်သလိုဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ပြောလိုက်တဲ့ ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုထိ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးတာ မရှိခဲ့သေးဘူး။ ငါပြောချင်တာပြောမယ် လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ဆိုတဲ့သဘောထားကို ပြည်သူတွေက မကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့ ၀န်ကြီးကို တာဝန်ကနေ အနားပေးလိုက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြည်သူတွေအပေါ် သစ်စာမရှိလို့ပဲ။ ဒီထက်ပိုပြောရရင် တစ်နိုင်ငံလုံး(ပြည်သူရော အစိုးရအဖွဲ့ရော) ကို လိမ်တဲ့အတွက်ပေါ့။ ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်မယ်။ အနည်းငယ်သည်းခံကြပါဆိုရင် ပြည်သူတွေက နားလည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သြော် ဒါနဲ့ ကိုကိုလှိုင်လည်းပါသေးတယ်နော်။ သမတအကြံပေးလုပ်ပြီးတော့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းနေပါဆိုတာက လမ်းဘေးက ကလေးကတောင် ပြောတတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းပါ။ အခြေအနေကို နားမလည်ဘဲနဲ့ ငါထင်တာ ငါပြောတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေကို မလေးစားရာကျတယ်။ (ပြည်သူများ ပေးဆောင်နေတဲ့ အခွန်များနဲ့ ရနေတဲ့ ပါမစ်များစွာခံစားနေသောသူများ) ဒါ့အပြင် သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှ ဦးနှောက်အရမ်းနည်းတာထင်ရှားတယ်။
ဒါကြောင့် အကြံပြချက်အနေနဲ့ဆိုရင် တာဝန်ရှိသူများ (၀န်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးများ)အား ရာထူးမှ အနားပေးလိုက်ပါ။ ကိုကိုလှိုင်လည်းပါတယ်နော် (သူကတော့ ယူထားတဲ့ရာထူးနဲ့ ပြောတဲ့စကားက ပြည်သူကို မလေးစား၊ (သို့မဟုတ်)ဦးနှောက်နည်းလို့ သူ့ကိုပါ တစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အကြံပြုချက်ကတော့ ဒါပါပဲ ကျေးဇူး။
Very stupid Ko Ko Hlaing, How did he become adviser. So stupid, Stupid, stupid,
သမ္မတ အကြံပေးဆိုတဲ့ ကြီးလေးတဲ့ရာထူးကိုယူထားပြီး ပြည်သူဆီကရတဲ့ လစာကို တနင့်တပိုးယူထားတဲ့ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုလက်လွတ်စပယ် စကားမျိုး မပြောသင့်ပါဘူး…. ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီလိုလူမျိုးကို ဒီလိုနေရာမှာ မထားသင့် မရှိသင့်ဘူးဆိုတာ သမ္မတကြီး နားလည် သင့်ပါပြီ… သူ့ ထက်အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများရှိ ရှာတွေ့ နိုင်ပါတယ်… မြန်မြန်အစားထိုးနိုင်လေ ပိုကောင်းလေပါပဲ…
I ever heard this kind of comment from someone working for the gov. He wasamanager in Agri sector. He said our country is poor and that’s why it will be difficult to make it well developed. People should understand their own status and follow the admin instruction by working together. But he the guy goes to the message everyday and spend his time with girls over there. U guys know how much it costs going to the message service. So members of the admin are double talkers. They say our country is poor and we have to be patient with the long process to the full grown development but at the same time they are making bulk money in any illegal ways and spend it like high bosses. Like DASSK said, our country is wealthy in natural resources and the people are not so low in intelligence but the sole problem is corrupt governance. It is what stirs the trouble. Planned mismanagement led us to the poorest status in the world. We all must go against it by now.
ko ko hlaing , the man with the shit head. Do you think you have enough education, experience , good personality , I.Q , smart background for this post ?. i think our president was absent to check this.
CV * says:
KK Hlaing brief CV:
His other names ( for articles) are Hlaing Aung (Nargis author) , Si Thu Aung , etc
သစ်ပင်ကြီးသည်ခုတ်လှဲသူကိုသော်လည်းမလဲမချင်းအရိပ်ဖြင့် အေးစေသည်၊နံ့ သာတုံးသည်မီးရိူ့ သူကိုသော်လည်းမကျွမ်းမချင်းအနံဖြင့် မွှေးစေသည်၊ဖယောင်းတိုင်သည်မီးရှို့ သူကိုမကုန်မချင်းအလင်းဖြင့် ထွန်းလင်းစေသည်၊သူတော်ကောင်းသည်ညှင်းဆဲသူကိုသော်လည်းမသေမချင်းအကိူးဆောင်ပေးသည်၊သည်လိုစိတ်ဓာတ်မိူး(ခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ်ဓာတ်)ရှိသူသာနိင်ငံကိုအုပ်ခူပ်သင့် သည်။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မိူးမြန်မာပြည်မှာတစ်ဦးပဲရှိတယ်၊ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အမေစု။